Apakah QnC Jelly Gamat bisa mengobati asam urat: Dongeng sleeping beauty bahasa malagasi
Long fotoana lasa izay dia niaina ny mpanjaka sy ny vadiny, izay nanao fanasana lehibe mba hankalaza ny nahaterahan'i ny zaza vavy, maratran'ny Rose. Fanasana no nalefa tany rehetra ny matoatoa mba hitso-drano ny andriambavy, afa-tsy ny iray araka ny heverina fa efa maty razazavavy. Ny tsirairay tamin'izy ireo tonga teo amin'ny mpanjaka ny andro firavoravoana nitondra fanomezana manokana ho an'ny kely andriana. Ny matoatoa dia nanomboka nanome ny fanomezam-pahasoavana. "Dia ho tsara tarehy izy," hoy ilay voalohany "." Izy dia ho hendry ", hoy ilay faharoa". ", Dia ho tsara fanahy izy," hoy ny fahatelo ". Fairy iray ihany no sisa mba hanome ny fanomezana, rehefa lasa tampoka ny efitrano maizina. Ary rehefa afaka lehibe tselatra ny fahazavana toy izany koa ny Fairy izay sisa avy, dia tonga Rehefa heverina.
Tezitra be izy toy ny tsy nisy nanasa azy tamin'ny andro firavoravoana. Dia hoy izy: "Eny mahery fo ny fitahiana andro firavoravoana. Ary hoy izy:" Eny mahery fo ny fitahiana fa tamin'ny tsingerintaona nahaterahany ny fahenina ambin'ny folo dia hametraka ny fanondrony eo amin'ny kofehy kodiarana ka ho faty. " Iray hafa tselatra ny fahazavana tonga ary ny Fairy lasa. Ary Fairy hafa izay nisy nanatona. "Ny fanomezana ny andriambavy tamin'ny mbola sisa." "Ny fanomezana ho azy ny fiainana! Rehefa manindrona ny ampela ny rantsan-tànany dia tsy ho faty izy, fa dia ho latsaka any an-tory. Izay haharitra mandritra ny zato taona. Ihany ny oroka avy ny tena fitiavana hifoha azy.
Ny andro manaraka ny mpanjaka namoaka fanambarana, nandidy fa nihodidina rehetra tanatin kodia sy ho ringana. Nandritra ny taona maro ny andriambavy nitombo ho tsara tarehy ankizivavy. Ny fahenina ambin'ny folo tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany no manomana ny olona rehetra ny antoko. Ny andriambavy Nanapa-kevitra ny handeha trandrahana an-dapa. "Manontany tena aho hoe inona no ao amin'ny tranobe atsimo lehibe," hoy izy ary nanao taminy làlana ho any aminy.
Izy nahita kely varavarana amin'ny manan-danja eo amboniny. Dia niverina izy ny fanalahidy sy ny varavarana nisokatra. Avy eo dia nahita ny sasany tohatra ary nanomboka nihanika ny. Mandritra izany fotoana izany ny mpanjaka sy ny vadiny nanomboka nitady ny mpanapaka. Rehetra nahita azy, nefa tsy misy olona mahalala izay itoerany izy efa lasa. Ny andriambavy efa tonga teo an-tampon'ny tilikambo, izay nahita varavarana iray hafa izay kely misokatra. Avy eo dia nandre feo hafahafa whirring, izay efa tsy reny eo anatrehan'i. Dia niditra tao an-trano ka nahita vehivavy antitra iray miasa ao amin'ny kofehy marika. "Nahoana ianareo no, nanontany maratran'ny Rose, ny andriambavy?" Mbola tsy nahita ny iray izay eo anoloan'ny, inona moa izany "? "Tena kofehy kodiarana, hoy ilay vehivavy antitra izay ny ratsy fanahy Fairy miafina.
Ny mpanapaka nanontany azy raha afaka manandrana sy mihodina amin'ny kodia, eo amin'ny ampela dia nandeha natory. Ary niaraka tamin'izay ny olona rehetra any amin'ny tany ihany koa ny resin-tory, ny mpahandro, ny mpiasa an-trano, mpanao fanompoam-pivavahana ny rehetra nodi-mandry. Ny andriambavy dia fantatra ankehitriny hoe fatoriana tsara tarehy. Taona lasa .... Ny zanakalahin'ny mpanjaka, ho avy ny malaza Brior fefy mba hahita ny zava-miafina ny amin'ny fatoriana tsara tarehy.
Indray andro izany mahafatifaty mpanjaka, nangataka mponina sasany fa aiza izy no mahita ny fefy? Fotsiny any an-dafin'ny tanàna tanora tompoko "hoy ny mponina. Ny Prince nandeha hamely amin'ny fefy, fa rehefa ny sabany nihaona ny tsilo lehibe raozy izay nitsiry, ary ny lalana nisokatra ho azy. Ary ny lohan'ny niditra tao an-dapa nankany amin'ny tilikambo efitra ka nahita ny andriambavy natory. izy nampindraminy ny ka moramora nanoroka azy. Brior nitsangana, ny fatoriana tsara tarehy flickered ny masony ka taitra. Rehefa nahita ny mahafatifaty mpanjaka dia raiki-pitia aminy. rehetra manodidina ny lapa ny olona nanomboka hifoha amin'ny torimaso. ny Prince sy ny andriambavy nanambady. fampakaram-bady ny mpanjaka naharitra nandritra ny andro maromaro mifarana amin'ny baolina tsara tarehy. ny Prince sy ny andriambavy nandihy ka nandihy nandritra ny alina.